Ibesi Dɛn Ama W’ebusua Enya Enyigye? | Asɛmpa
1. Ebɛnadze ntsi na mbra kwan do awar ho hia na ama ebusua enyi agye?
Asɛmpa no fi Jehovah a ɔyɛ Nyankopɔn siarfo no nkyɛn. Ɔpɛ dɛ mbusua nyina nya enyigye. (1 Timothy 1:11) Ɔno na ɔhyehyɛɛ awar. Mbra kwan do awar ho hia na ama ebusua enyi agye, osiandɛ ɔma awarfo na hɔn mba nya ahobambɔ. Ɔsɛ dɛ hɔn a wɔpɛ dɛ wɔyɛ setsie ma Nyankopɔn no kyerɛ obu ma ɔman no ne mbra a ɔhwehwɛ dɛ, wɔdze awar hyɛ mbra ase no.​—Kenkan Luke 2:1, 4, 5.
Nyankopɔn n’adwen wɔ awar ho nye dɛn? Ɔpɛ dɛ awar yɛ nkabɔmu a ɔtsena hɔ daa wɔ banyin na basia ntamu. Jehovah pɛ dɛ kunnom na yernom dzi hɔn ho nokwar. (Hebrewfo 13:4) Okyir awargu. (Malachi 2:16) Naaso, ɔma kwan ma Christianfo gyaa awar san war bio ber a hɔn ahokãfo atõ awar no.​—Kenkan Matthew 19:3-6, 9.
2. Ebɛn kwan do na ɔsɛ dɛ kun na yer nye hɔn ho dzi?
Jehovah bɔɔ mbanyimfo na mbasiafo dɛ wɔmboa hɔnho wɔ awar mu. (Genesis 2:18) Kun na ɔyɛ ebusuatsir na n’asodzi nye dɛ, ɔbɔhwɛ ama n’ebusua no hɔn honam afamu ehiadze na ɔaakyerɛkyerɛ hɔn Nyankopɔn ho adze. Ɔsɛ dɛ ɔdze noho bɔ afɔr dze da ɔdɔ edzi kyerɛ ne yer. Ɔsɛ dɛ kunnom na yernom nya ɔdɔ na obu ma hɔn ho. Osiandɛ kunnom na yernom nyina tɔ sin ntsi, ɔyɛ asɛnhia dɛ wɔdze bɔn bɛkyekyɛ hɔn ho na ama woeenya enyigye wɔ hɔn awar mu.​—Kenkan Ephesusfo 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Peter 3:7.
3. Sɛ w’enyi nngye wɔ w’awar mu a, aso ɔsɛ dɛ igyaa wo hokãfo?
Sɛ hom hyia nsɛndzendzen wɔ hom awar mu a, hom mbɔ mu nda ɔdɔ edzi nkyerɛ hom ho na hom mfa ndzi ho dwuma. (1 Corinthfo 13:4, 5) Nyankopɔn n’Asɛm nnhyɛ ntsetsewmu ho nkuran dɛ ɔyɛ kwan a wodua do dzi awar mu nsɛndzendzen a ɔtaa sisi no ho dwuma.​—Kenkan 1 Corinthfo 7:10-13.
4. Mbofra, ebɛnadze na Nyankopɔn pɛ dɛ hom nya?
Jehovah pɛ dɛ hom nya enyigye. Ɔma hom afotu a oye sen biara mbrɛ ɔbɛyɛ a hom bɛyɛ sɔkyee wɔ hom mbabun ber mu. Nyansa na suahu a hom awofo wɔ no, ɔpɛ dɛ hom nya do mfaso. (Colossaefo 3:20) Jehovah san so pɛ dɛ hom nya enyigye wɔ hom Bɔfo nye ne Ba no apɛdze a hom bɛyɛ no mu.​—Kenkan Ɔsɛnkafo 11:9–12:1; Matthew 19:13-15; 21:15, 16.
5. Awofo, hom besi dɛn ama hom mba enya enyigye?
Ɔsɛ dɛ hom yɛ edwumadzen dze pɛ edziban a hom mba bedzi, dabew, na ntar a wɔbɛhyɛ. (1 Timothy 5:8) Naaso, sɛ hom mba botum enya enyigye a, ɔsɛ dɛ hom san so kyerɛkyerɛ hɔn ma wonya ɔdɔ ma Nyankopɔn na wosũasua no. (Ephesusfo 6:4) Sɛ hom da ɔdɔ edzi dze yɛ nhwɛdo ma hom mba a, obenya hɔn akoma do tum kɛse. Sɛ hom dze hom kasakyerɛ na nyansahyɛ gyina Nyankopɔn n’Asɛm do a, obenya hɔn adwen do tum na wɔnnkɛdan efi ho.​—Kenkan Deuteronomy 6:4-7; Mbɛbusɛm 22:6.
Sɛ ehyɛ mbofra nkuran na ekamfo hɔn a, ɔboa hɔn kɛse. Mbofra san so hia ntsẽa na nkaenyim. Ntsetsee a ɔtse dɛm no bɔ hɔn ho ban fi ɔbrakyew a obotum asɛɛ hɔn enyigye no ho. (Mbɛbusɛm 22:15) Naaso, mma hom nntsẽa hɔn do wɔ etsirmɔdzen mu.​—Kenkan Colossaefo 3:21.
Jehovah Adasefo tsintsim nwoma ahorow pii a wɔhyɛ da kyerɛw a ɔboa awofo na mbofra. Dɛm nwoma ahorow yi nyina gyina Bible no do.​—Kenkan Ndwom 19:7, 11.
W’Ebusua Botum Enya Enyigye
Ɔdɔ a Jesus daa no edzi no yɛ nhwɛdo a kunnom, yernom, awofo nye mbofra botum esuasua. Ebɛnadze na yesũa fi no hɔ?
Fa mona Fa mona Ibesi Dɛn Ama W’ebusua Enya Enyigye?